Xafiiska qareenada ama garyaqananka ee adiga raba inaad joogto iswiidhan.
Waxaann ka caawinaa dadyoowga ka kala yimi dunidda dacaladeeda arrintooda ama qadiyadooda. Xuquqdaada bini adami nimo waa hadafkayaga. Warbixin si faahfaahsan oo ku saabsan hawlaha anu qabano waxad ka heleysa qoraalkan hoose:
Magangelyo macnaheedu waa amaan. Marka aad codsato magangalyo macnaheedu wuxuu yahay inaad ka codsanayso badbaado ama amaan dal kale oo aan ahayn dalkaaga hooyo…
Dadka kugu xariira (Ehelkaaga)
Hadii lugu siiyey sharciga degenaashaha dalka Iswidhan waxa mararka qarkood dhacda ehelkaaga kuugu dhow inaay xaq uleyihin sharciga degenaan-shaha ee iswiidhan adiga xariirkaaga ehelnimo awgeed…
Iswiidhan in aad ka shaqeyso waxaad u bahan tahay ruqsad shaqo. Waxaanu adiga amma idinka ama loo shaqeeyahaga idin ku caawin karna wixii warbixin ah ee ku saabsan codsiga ruqsadda shaq…
Hadii aadan haysanin oggolaanshaha in aad dalkan joogto oo lagu celinayo ama masaafurinayo waxad halis u tahay in mararka qaar meel lagugu xiro. Hadii hay’adda waaxada socdaalku ay u aragto in ay tahay lagama maarmaan in baaris lagu sameeyo xaqaga innad dalkan iswiidhan joogto…
Dhalashadda ama Jinsiyadda
Marka aad muddo cayiman ku noloyd Iswidhan oo aad buxisay dhamaan shurudihii lagaa rabay ayaad codsan karta jinsiyadaa/dhalashada iswidhishka. Arimaha ay waaxda socdalku eegaan marka codsiga…
Waxa kale oo ayagana aanu qabanaa arimaha ku saabsan ilaalinta caruurta ee difaaca fal dambiyeedka, doonyaqaadka dhibbanaha ama wakiilka gaarka u ah caruurta iyo xukunaddan LVU/LVM/LPT/LVR…
Nala soo xirrir
Soo dhowow inaad nagala soo xirirtid su'ualhaga ku saabsan sharciga oo dhaman.
Soo dhawoow innad nugula soo xiriirto hadi aad qabto su'aalo xaga sharciga. Waxaannu joogna xafiisyo badhtanka Hötorget ku yalaa ee Stockholm.
Ka firi kharidadda.
So dhowow oo nagala su xariir emailka haddi aad ubaahantahay kaalmo ama aad dooneyso innaad wax nawaydiiso.
Talobixin lagac la'aan ah
Ku soo dhowow innad na soo wacdid marka aad su'aalo qabto ama haddi aad rabto inaad dhigato ballan aad nagula kulanto.